LinkedIn na-ebupụta Linkedin Weebụ Demographics | Martech Zone
LinkedIn na-agbasa nnukwu atụmatụ ọhụrụ n'izu na-abịa abịa, LinkedIn Weebụsaịtị Demographics. Mkpokọta ndi mmadu na ebe nrụọrụ weebụ na-eji data sitere na ndi otu 500 nke LinkedIn iji nye ihe omuma banyere ndi nleta webusaiti nke gi nke na-akwanyere nzuzo nke ndi otu.
Igosiputa uzo di mfe igu n’ime LinkedIn Campaign Manager, Mkpokọta ndi mmadu na ebe nrụọrụ weebụ na - enye gi ohere iza ndi na - ege gi nti site na aka mmadu abuo, tinyere:
Ulo ụlọ ọrụ
Mkpokọta mmadu ga - enye gi ohere ichoputa site na ubochi nke ozo iji ghota ma mgbasa ozi ahia a na - adịbeghị anya kwalitere okporo ụzọ site na ndi mmadu choro. Kedu ihe ọzọ, ị nwere ike ịhụ ugbu a ma ọ bụrụ na ị dọtara ọdọ mmiri ọhụrụ nke atụmanya na weebụsaịtị gị. Site na nghọta ndị a, ị nwere ike ịmepụta ọdịnaya azụmaahịa ọhụụ emebere iji kwalite nke ọma na ndị na-ege ntị.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị na-agba ahịa maka azụmaahịa IT ma na-echekarị ndị isi teknụzụ ndị dabeere na US. Na-ele anya na dashboard weebụsaịtị gị, ị ga-achọpụta na ndị isi nlekọta ahụike EMEA na-eleta ibe ngwaahịa karịa ka ị chere. Ejiri ihe ọmụma a, ị nwere ike ịhazi usoro ịzụ ahịa gị iji lekwasị ndị na-ege ntị ọhụụ achọpụtara.
Mkpokọta ndi mmadu na-enye anyi ihe omuma bara uru banyere uzo di iche iche nke weebụsaịtị anyi. Ọ na-enyere anyị aka ịghọta nke ọma ma ọ bụrụ na anyị na-abịakwute ndị na-ege ntị ziri ezi na usoro azụmaahịa weebụ anyị yana ịkọwapụta nke ọma gbasara ndị na-ege anyị ntị na ntanetị niile. Bhanu Chawla, Isi nke Digital Strategy, Nkume OnDemand
LinkedIn Weebụsaịtị Demographics bụ isi mbuli elu na-enyere gị aka ịme mkpebi gbasara ịre ahịa iji bulie azụmaahịa gị. N'inwe ike ịchịkọta nghọta tupu, n'oge ma ọ bụ mgbe mkpọsa, ị nwere ike imeziwanye usoro gị ma mee mkpebi amamihe dị na ahịa.
Tags: Analyticsụlọ ọrụnha ụlọ ọrụmbankọwapụtaụlọ ọrụọrụ ọrụagadi ọrụaha ọrụLinkedInnjikọ na ebe nrụọrụ weebụ jikọtara ọnụebenchịkọta weebụnchịkwa weebụ
Kedu ụdị mkpụrụedemede kacha mma maka Email? Gịnị Bụ Email Nchekwa Akara Aka?
Jul 31, 2017 na 1:52 PM
Hi Douglas Karr, Daalụ nke ukwuu maka ide banyere Linkedin Website Demographics. Ọ ga-enyere anyị aka nke ukwuu maka ịre ahịa weebụ.